Fampiasana ny Video Rehetra | TV.JW.ORG
Afaka mijery video amin’ny fotoana rehetra ao amin’ny tv.jw.org ianao ao amin’ilay hoe Video Rehetra. Afaka mampiato, mamerina, na mampandroso haingana an’ireo video ianao ao. Afaka mijery video iray na ny video rehetra ao amin’ny fizarana iray ianao. Tsindrio ilay hoe Video Rehetra dia ho hitanao ireo fizarana samihafa. Araho ny toromarika eto ambany raha hikaroka sy hijery video:
Mitady sy mandefa video
Manovaova ny fijerena video
Miseho ireo karazana video rehefa manindry an’ilay hoe Video Rehetra ianao. Misy sary mampiseho ny karazany tsirairay, miaraka amin’ny lohateniny. Mety ho hita any anaty karazany maromaro ny video iray. Hita ao amin’ny Filma, Fianakaviana, ary Tanora, ohatra, ilay video hoe Nody Ilay Zanaka Adala.
Akisaho midina ny efijery mba hahitana ny karazany rehetra.
Tsindrio eo amin’ny sary mampiseho ny karazany iray na ny lohateniny rehefa hanokatra azy. Hisokatra eo an-tampon’ilay pejy avy eo ilay sary, miaraka amin’ny lohateniny sy ny mombamomba azy. Eo ambanin’ilay sary kosa no ahitana an’ireo video ao anatin’ilay karazany.
Ordinatera na “tablette”: Tsindrio eo amin’ilay filesy havia na havanana raha hijery video hafa ianao.
Smartphone: Izay video voalohany ao amin’ilay karazany fidinao no miseho. Tsindrio ilay hoe Hijery Hafa raha hijery video hafa ao ianao.
Tsindrio eo amin’ny sarin’ilay video na ny lohateniny rehefa hifidy video. Hisokatra eo an-tampon’ilay pejy avy eo ilay sary, miaraka amin’ny lohateniny sy ny mombamomba azy ary ny faharetany.
Tsindrio ny hoe Handefa raha te hijery an’ilay video. (Fanamarihana: Mila manindry an’ilay sary kely mampiseho hoe Handefa ihany koa ianao rehefa misokatra ilay mpamaky video raha iOS na Android no ampiasainao.)
Tsindrio ilay hoe Haka raha tianao hotehirizina ao amin’ny ordinateranao na ny fitaovana entin-tanana ampiasainao ilay video. (Fanamarihana: Mety hila programa hafa ny fitaovana entin-tanana sasany, vao ho afaka haka video.) Fidio izay tarehimarika mampiseho ny hatsaran’ny video tianao halaina.
Raha efa nanomboka nijery video iray ianao ka niala ary miverina eo indray, dia tsindrio ilay hoe Hanohy raha tianao hotohizina ny fijerena azy. Tsindrio kosa ilay hoe Alefa Hatramin’ny Voalohany raha tianao haverina hatramin’ny voalohany ilay izy.
Soso-kevitra: Mba tsy hanokafana an’ireo video tsirairay, dia azonao tsindriana ilay hoe Handefa Azy Rehetra eo akaikin’ny lohatenin’ilay karazany mba handefasana ny video rehetra ao.
Fanamarihana: Tsy misy video mandeha intsony rehefa avy nandeha daholo ny video ao amin’ilay karazany.
Rehefa manao an’ilay hoe Handefa Azy Rehetra dia azo tsindriana ny Hiverina raha te hiverina amin’ilay video teo aloha.
Rehefa manao an’ilay hoe Handefa Azy Rehetra dia azo tsindriana ny Manaraka raha te hijery ny video manaraka.
Azonao ovaovana ny fijerena video ao amin’ilay hoe Video Rehetra, araka ny aseho manaraka eto:
Ordinatera: Raha tianao hameno ny efijery ilay video, dia ataovy mankeo amin’ilay video ny totozy, ary tsindrio ilay sary kely hoe Hameno Efijery.
“Tablette” na “smartphone”: Raha tianao hameno ny efijery ilay video, dia tsindrio aloha ilay izy ary avy eo, eo amin’ilay sary kely mampiseho hoe Hameno Efijery.
Ordinatera: Tsindrio ny Escape na Echap raha tsy tianao hameno ny efijery intsony ilay video. Na, ataovy mankeo amin’ilay video ny totozy ary tsindrio ilay sary kely mampiseho hoe Antonony.
iOS: Raha tsy tianao hameno ny efijery intsony ilay video, dia tsindrio aloha ilay izy ary avy eo, eo amin’ilay sary kely mampiseho hoe Antonony.
Android: Raha tsy tianao hameno ny efijery intsony ilay video, dia tsindrio aloha ilay izy ary avy eo, eo amin’ilay sary kely mampiseho hoe Antonony. Tsy mandefa afa-tsy video mameno efijery ny Android sasany taloha kokoa.
Windows Mobile: Raha tsy tianao hameno ny efijery intsony ilay video, dia tsindrio ilay hoe Hiverina, ao amin’ilay fitaovana.
Tsindrio ny Hampiato raha te hampiato ny video.
Tsindrio ny Handefa raha hanohy hijery video.
Azo akisaka mankeo aloha na mankeo aoriana ny bokotr’ilay video, arakaraka izay tianao hojerena.
Ordinatera: Raha te hanova ny hatsaran’ilay video ianao, dia ataovy mankeo amin’ilay video ny totozy, ary tsindrio ilay sary kely mampiseho ny Firafitry ny Video. Fidio avy eo izay mety aminao. (Fanamarihana: Misy programa fanokafana Internet tsy mety hanaovana an’izany.)
“Tablette” na “smartphone”: Raha te hanova ny hatsaran’ny video ianao, dia tsindrio eo amin’ilay video, ary tsindrio ny sary kely mampiseho ny Firafitry ny Video. Fidio avy eo izay mety aminao. (Fanamarihana: Misy fitaovana entin-tanana tsy mety hanaovana an’izany.)
Ordinatera: Raha te hanova ny hamafin’ny feo ianao, dia ataovy mankeo amin’ilay video ny totozy, ary tsindrio ilay sary kely mampiseho ny Hamafin’ny Feo. Ampiakaro na ampidino ilay izy arakaraka izay itiavanao ny hamafiny.
“Tablette” na “smartphone”: Raha te hanova ny hamafin’ny feo ianao, dia ampiasao ny bokotra fanaovana an’izany eo amin’ilay fitaovana.